Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Harka Mirgaa Kutuun akka Harki Bitaa darbannaa baruufi! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroo Bilisummaa Oromoo: Harka Mirgaa Kutuun akka Harki Bitaa darbannaa baruufi!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Harka Mirgaa Kutuun akka Harki Bitaa darbannaa baruufi!
Uummatni Oromoo erga bittaa alagaa jalatti kufee bifa gurmuunis haa tahu qeenxeen wareegama lubbuu qaalii deebii hin qabne kaffalaa as gahe ammas kaffalaa jira.
Oromoo fi Oromummaa Jiraachisuuf Qabsaa’ota Oromoo kitilootaan daa’ima kichuu irraa hanga manguddootti itti dhabaa turre ammas dhabaa jirra.
Haaluma kanaan taateen guyyaa kaleessaa Caamsaa 3/2021 halkan keessa mana jireenyaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa irratti raawwatame haalaan sukkaneessaa fi miidhaa Hamaa kan qaqqabsiise tahuu biyyittiifis ummata Oromoofis addatti immoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsootti jiraniif hedduu rifaasisaa kan ture ammas haalli jiru yaaddessaa kan taheen wal qabatee baayyee rakkisaa taheera. Qeerroon Bilisummaa Oromoo ammatti qabsoon karaa nagaaf godhamaa ture karaa dhaaba Keenya ABO fi KFO guutummaa guutuutti balballi isaa cufamee jira waan taheef furmaanni maayii qabsoo Oromiyaa fi Oromummaa dandamachiisuuf ykn badinsa irraa oolchuuf akkasumas Qabsaa’ota qabsoo sabaa baraaruuf falli maayii warraaqsa tahuu hubatee jira.
Guyyaa kaleessaa Gamtaan Awurooppaa Filannoo Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu taajjabuuf kan ture haquu isaa Marii paartiilee siyaasaa waliin godheen mirkaneessee jira. Akkasumas senetaroonni Amerikaa shan Filannoo ltiyoophiyaa gaggeessuuf jettu kan sirna ykn ulaagaa guute miti waan taheef dhiibbaa gama kamiinuu biyyi isaanii akka irratti gaggeessitu gochuun ni yaadatama. Murni abbaa Irree Abiyyi Ahimed kan Qabsaa’ota Oromoo nyaatee dhugaa ture bara olaantummaa TPLF irraa eegalee hanga amma hoggansummaa isaatti dhiiga lammiilee hedduu ficcisiisaa jiraachuun akka biyyittiin nagaa hin arganne godhee jira.
Ummanni kuni magaalaa haxaayyiirraa buqqa’anii riqicha jissaatii gadi lagarra jiran. Abbaa warraa 30 oli tahu. Mana tokko keessa abbaa warraa 5 hanga 6 tahanii mana goojjoo takka keessa jiraatu. Roobaa fi aduun dararamaa jiru. Gargaarsi maqaa buqqaatootaatiin godhamaa jirus bira gahee hin beeku. Inni gargaaramu warra magaalaa keessa jiraatuudha. Dagatamanii rakkoof saaxilamaa jiru. Saniif ummanni keenya alaa fi keessaa ummata kana quba qabaachuu qaba.
OMN:ዕለታዊ ዜና (May.4.2021)
OMN Horn: Odeessaalee Har’aa (Caamsaa 4, 2021)